We She Me: Pet ကလေး အရွယ် (၈လမှ ၉လ)
imaginary clouds no2- 1/13/08, 4:41 PM
သမီးမြတ်နိုးလေးက ချစ်စရာ အတော်ကောင်းတယ် ။ ဗီဒီယို ကလစ်တွေထဲ က အမူအရာတွေကော ။ ( နောက်ဆို လက်တောပ့် ကို ရေနဲ့လောင်းတာတို့ ။ တီဗီကို ဆွဲချတာတို့ လုပ်လာမယ်လို့ အန်ဒီ မျှော်လင့်ထားပြီးပြီလို့ ကျနော်ယုံတယ် ။) ကျနော် ဝမ်းခွဲညီတစ်ယောက်ဆို ခပ်ငယ်ငယ်က တီဗီကို တုတ်နဲ့ရိုက်တာ။ ဘာကို မကျေနပ်နေလဲ မသိဘူး ။ နောက် အိမ်နားက ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဆို စိတ်ဆိုးလို့သူလိုချင်တာမရရင် နံရံတို့ ။ သံမံတလင်းတို့ကို ခေါင်းနဲ့တိုက်တာ ။ တကယ်ကိုတိုက်တာ ။
nu-san - 1/14/08, 4:00 AM
တုန်တုန်ပုံလေးက တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီ။ အမဆို အပြင်မှာတခါမှ မမြင်ဖူးပေမယ့် သူ့ကို Andy ရဲ့ blog ကနေ ကြည့်ရင်း မျက်စိအောက်မှာကိုပဲ ၈ လကျော်လာပြီ။ တီတီတာတာပြောတတ်ရင်ပိုပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းအုံးမယ်နော်.. သူ့ပါးနှစ်ဘက်က ဖောင်းနေတာပဲ.. :)
Andy Myint - 1/14/08, 9:51 AM
ဟုတ်တယ်.. ကိုတိန်ရေ.. ကလေးတွေက ဒါမျိုးဆို သိပ်ကြိုက်တာ။ သူလည်း ဘယ်လို အစွမ်း ပြမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
ကျေးဇူးပါ မနုစံ။ လူကြီးတွေ အတွက် တစ်လ တစ်လ မသိသာပေမယ့် ကလေးကတော့ တော်တော် တိုးတက်လာတယ်။ စကားပြောတတ်ရင် လူကြီးတွေကို ဘယ်လို ညာချွဲဦးမလဲ မသိဘူး။
j - 1/14/08, 10:20 AM
အ၀တ်ပုံးထဲက အ၀တ်တွေ ထုတ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို youtube မှာ housekeeping ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပါလား။ ရီစရာချစ်စရာကောင်းတယ်
Phyo Wai Kyaw - 1/14/08, 12:59 PM
AKM ရေ... ဟုတ်တယ်ဗျ။ သမီးလေး က တဖြည်းဖြည်း တဖြည်းဖြည်း နဲ့ တိုးတက်လာတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲဗျာ။ ဘေး ကနေ ဘလော့ ကနေပဲ ကြည့်ကြည့်နေရတဲ့ သူတွေတောင် LIVE လိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။
Andy Myint - 1/14/08, 10:10 PM
ဟုတ်လား.. ကိုဖြိုး။ အဲဒီလို အမြဲတမ်း ပုံမှန် Update လုပ်ဖို့ Micro-Blogging နဲ့ စမ်းကြည့်သေးတယ်။ သိပ်မကြိုက်တာနဲ့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တာ။
နာမည်လေး ကောင်းတယ်... J ။ ပြောင်းလိုက်မယ်။ Google Video မှာ တော့ တင်ထားတယ်။ Listed တော့ မလုပ်ထားဘူး။ YouTube ကို သုံးဦးမှ။ ပြောရင် ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး။ YouTube မသုံးဖူးသေးဘူး။
Joyful Agency - 1/16/08, 2:18 PM
ဆားဗစ်အသစ် အေဂျင်ဆီအသစ် ကို အလုပ်အပ်လိုပါက ကြွခဲ့ပါ။ http://joyful4all.blogspot.com/2008/01/housekeeping-from-joyful-agency.html
လုလု - 1/16/08, 5:31 PM
ကိုအင်န်ဒီရေ့့့  သမီးလေးပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးလိုက်ရတာ။ အစ်ကို့ မိသားစုဆိုရင်တော့ ပီတိတွေအပြည့်နဲ့ ပျော်နေမှာပဲနော်။ သမီးလေးရဲ့ လစဉ်မှတ်တမ်းလေးလို လုပ်ထားတဲ့အတွက် သမီးလေးကြီးလာရင်လည်း အမှတ်တရ ဖြစ်နေစေမယ့်မှတ်တမ်းလေးပေါ့။ ဒီကနေတော့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်လို့မရဘူး။ နောက်အခွင့်ကြုံမှ ကြည့်လိုက်မယ်နော်
Andy Myint - 1/17/08, 9:09 AM
မလုလုရေ.. ကလေးရှိတဲ့ မိသားစုတိုင်း ဒီလိုပါပဲ။ အိမ့် ဆည်းလည်းလေးတွေလေ။ အင်း.. ကလေးကြီးလာလို့ ဖတ်နိုင်အောင် မြန်မာစာတော့ အရင် သင်ပေးရဦးမယ်။ ဒါမှ ဘုရားစာလည်း ဖတ်နိုင်မှာလေ။
Joy ရေ.. ကလေးထိန်းတဲ့ အေဂျင်စီရော မလုပ်ဘူးလား။
Anonymous - 1/20/08, 2:00 PM
She can dance without learning, so cute:-) Btw, her hair is justalittle .It is better to shave her hair frequently b4 she gets shy for her bald head coz of shaving. Just imaging for her to getathick silky hair when she gets older.
Andy Myint - 1/21/08, 3:37 PM
အဲဒါ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ အငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စလေ။ ကတုံး တုံးသင့် မတုံးသင့် ဆိုတာကို။ သူ့ဆံပင်လေးတွေက ပါးတာရယ်၊ ဒီပါးပါးလေးနဲ့ပဲ သူက အိုက်နေတာရယ်၊ ဒီက ကလေး မလေးတွေက ဆံပင် ရှည်ရှည်နဲ့ ဖြစ်တာရယ်နဲ့ တုံးမယ် မတုံးဘူ ကြာနေတာ.. Comment အတွက် ကျေးဇူးပါ။
pan nwe - 10/1/08, 3:48 AM
ဒီနေ့ သားကို မြတ်နိုးရဲ့ ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ပြတော့ သေချာကြည့်နေတယ်..ကိုအန်ဒီရေ..:)။